Addunyaa ispoortiitti qabeenyaan Riyaal Maadriid 1ffaa; Baarseloonaafi Manchastar 4ffaa fi 5ffaa...
Akka gabaasni barruu Forbes ifa godhetti qabeenyaan gareen ispoortii gosa kamiiyyuu addunyaa tana irratti Riyaal Maadriid hindursu. Riyaal Maadriid ol’aantumma qabeenyaa garee ispoortii hundarratti...
Oduun oo’aan ammaa isa gooliifi geebaa miti; isa taphattoonni kilabii isa tokkoo gara isa biraatti daddarbuu addeessu malee. Kanumaan wolqabatee oduun gurguddaan kan dhagayamaa...
Hanga yeroo dhihootti qillensa oduu ture. Amma garuu oduu mirkanaaye. Taphataan beekamaan, fuula Riyaal Maadriid hanga jedhamuutti kan gaye, Iker Kasiyyaas Riyaal Maadriidn gargar...
Admin - Jun 11, 2015 0
Dirree kubbaa irratti taphataa kamtu caalaan, irra jireessatti Ronlaadoofi Mesii wolbira qabaa, falamii yeroo hedduuf adeemaa tureedha. Isa kanatu san caalaa, bifa wolnama hindhabsiisneen,...
Kan Baarseloonaa beeku hundi Jaaviiyeer ‘Jaavii’ Hernaandeez hinbeeku jechuun nama dhiba. Jaaviin woggoota 17 argaa Baarseloonaaf fuula, dirree taphaa irratti ammaoo motora ta’ee tajaajilaa ture....
Cheelsiin Priimer Liigii Ingiliiz bara 2014/15 injifate
Cheelsiin Priimer Liigii Ingiliiz bara 2014/15 injifate. Cheelsiin injifannoo kan gonfate tapha guyyaa har’aa dirree isaa Staanfoord Briij irratti garee Kiristaal Paalaas wojjiin taasiseen....
Garee 32 Shaampiyoonaa kilaboota Awurooppaa irratti hirmaatan keessaa kilaboonni 4 wolakkeessa xumuraaf dhiyaatan beekkaman. Kilaboonni wolakkeessa xumuraaf dabran Baarseloonaa, Riyaal Maadriid, Baayer Muniikiifi Juveentus...
Arsenaaliifi Riyaal Maadriid kanniin muummee liigii irra jiranitti dhiphisan
Arsenaal 1 - 0n Barnileey injifachuudhaan abdii liigiicha injifachuutti lubbuu hore. Injifannoon har'aa addaaddummaa Arsenaaliifi Cheelsii jidduu jiru gara qabxii afuriitti dhiphiseera. Goolii Arsenaaliin...
Taphoota sanbata har'aa kilaboota Priimer Liigii Ingiliiz heddu jiddutti geggeeffameen kilaboonni gabatee Priimer Liigii irrati sadadarkaa ol'aanaa irra jiran hundi morkattoota isaanii moo'achuu danda'aniiru....
Gareen Arsenaal garee Manchastar Yunaayitid 2 - 1n moo'achuudhaan tankaarfii guddaa gara geeba FA Cup wolitti aansee moo'achuutti godhe. Arsenaal, Manchastar Yunaayitidiin dirree 'Old...